Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ဗမာအာဏာရှင်သန်းရွှေတို.လိုဘဲမိုက်မဲခေါင်းမာနေတဲ့ကဒါဖီအာဏာရှင်တပ်ကိုမဟာမိတ်တပ်များကတိုးမဟော့ခ်မစ်ဆဲလ်အလုံးပေါင်း ၁၁၀ ဖြင့်စတင်ပစ်နေပြီ၊သန်းရွှေအလှည့်ရောက်မယ်၊ Next line is Burma dictator Than Shwe's troop. (ဗွီဒီုယို)
ဗမာအာဏာရှင်သန်းရွှေတို.လိုဘဲမိုက်မဲခေါင်းမာနေတဲ့ကဒါဖီအာဏာရှင်တပ်ကိုမဟာမိတ်တပ်များကတိုးမဟော့ခ်မစ်ဆဲလ်အလုံးပေါင်း ၁၁၀ ဖြင့်စတင်ပစ်နေပြီ၊သန်းရွှေအလှည့်ရောက်မယ်၊ Next line is Burma dictator Than Shwe's troop. (ဗွီဒီုယို)
သန်းရွှေအာဏာရှင်အုပ်စုအလှည့်ရောက်မှာကိုစိုးရိမ်းနေတဲ့မဟာဝါဒီသမားတစ်ချို.ကစိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးတိုက်ပွဲဖြင့်ဒီလိုရေးသားတယ်ဗျ၊ ”ဒါကတော့ လစ်ဗျားရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကိုရော၊ ပြည်သူတွေကိုရော စော်ကားတာပါ၊ ငါတို့ လက်အောက်ခံ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ပြည်တွင်းရေး ၀င်စွက်တာလို့ မြင်ပါတယ်။စစ်ဝင်တိုက်စရာမလိုပါဘူး။ လွတ်မြောက်လိုသူတွေကို အခြားနည်းနဲ့ပဲ အားပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ကံကြမ္မာ ကိုယ်တိုင်သာ ဖန်တီးသင့်ပါတယ်။ အီရတ်နဲ့ အာဖဂန်မှာ အားကိုးလွန်တော့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေပဲ ဒုက္ခ ပင်လယ်ဝေနေကြရတာ သင်ခန်းစာယူကြပါ။”
American, French and British forces have attacked Muammar Gaddafi's forces, in the first strikes to enforce the UN-mandated no-fly zone in Libya. More than 110 Tomahawk missiles fired from American and British ships and submarines hit about 20 Libyan air and missile defense targets.